जूलियस सिजरको बारेमा7पुस्तकहरू उनको जन्मको वार्षिकोत्सवमा | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | जीवनी, हास्य, किताबहरु, नोभेला, थिएटर
आयरिश अभिनेता Ciar Hindn हिन्ड्स टेलिभिजन श्रृंखला को लागि जूलियस सीजरको रूपमा रोम, HBO बाट। वाक्यांश विलियम शेक्सपियरको जुलियस सिजरको हो।
जूलियस सिजर भित्रबाट उज्यालो देखा रोम el जुलाई १,, १०० ख्रिष्ट अघि (सब भन्दा स्वीकार्य मिति अनुसार), त्यसैले उनको जन्मको नयाँ वार्षिकोत्सव मनाइन्छ। यो एक हो सबैभन्दा ठूलो पात्रहरूको मानव ईतिहासको र हामी सबैले यसको बारेमा केही पढेका, देखेको र सुनेका छौं। र भाग्यवस हामी अझै उनलाई पढ्न सक्छौं।
को को स्नातक को अध्ययन शुद्ध अक्षरहरू हामीले ल्याटिनको पहिलो धारणा त्यससँग सिकेका थियौं Gallia भाग तीन मा सबै भागहरु छन्, उहाँको बाट सुन्दर ग्यालिकोको, ला ग्यालिक युद्ध। र धेरै बच्चाहरूले एस्टरिक्स र ओबेलिक्सको अपूरणीय गउल्ससँग गरीब जुलियोको रोमांच र मिसadभेन्चरका साथ पढ्न सिक्नेछन्। तर हामी यी books पुस्तकहरू समीक्षा गरौं नायकको रूपमा उनको बारेमा धेरै लेखहरु र ऐतिहासिक आंकडा वा जस्तो क्यारेक्टर उपन्यास र नाटकहरूको।
सबैभन्दा क्लासिकहरूसँग सुरु गरौं।
1 समानान्तर जीवन - प्लुटार्क
2 दिव्य जुलियस सीजरको जीवन - सुइटोनियस
3 जूलियस सीजर - विलियम शेक्सपियर
4 रोक्नुहोस् परिभाषित जीवनी - एड्रियन गोल्डस्वाइटबल
5 जहाँ पहाडहरू कराइरहेछन् - फ्रान्सिस्को नारला
6 Cesar - Colleen McCullough
7 जूलियस सीजर र गैलिक युद्ध - एनी-मारी जार्का
समानान्तर जीवन - प्लुटार्क
को जीवनी यस खण्डको यो ग्रीक इतिहासकार र दार्शनिकको कामको हिस्सा हो जहाँ उनले ग्रीस र रोमलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछन्। यसैले, यो विरोधाभास छ अर्को रोमन संग एक महान ग्रीक चरित्र। प्लुटार्कोले यी जीवनहरू उसको बाल्यकाल र प्रशिक्षणदेखि लिएर आफ्नो मृत्यु सम्म सुनाउँदछ। उसले नैतिक अभिप्रायलाई संरक्षण गर्ने पात्रहरूको मनोवैज्ञानिक पोर्ट्रेट चित्रण गरेर ऐतिहासिक डेटा रचना गर्छ।
दिव्य जुलियस सीजरको जीवन - Suetonium
इतिहासकार Suetonio Tranquilo कुञ्जी (सी। -69 -140 -१XNUMX० एडी) जन्म भएको थियो जब फ्लाभियन राजवंश सत्तामा आए। उनले आफ्नो जीवनको प्रायः रोममा काम गरे र सम्राटको सेवामा थिए ट्राजन। पछि, र को समय मा सचिव को रूप मा adriano, शाही अभिलेखहरूमा पहुँच गर्न सक्षम थियो। तिनीहरू भेटिए सिजर र अक्टाभियो अगस्टो बीचको पत्राचार, सामग्री जुन उसले उसको लागि प्रयोग गर्‍यो बाह्र सिजरको जीवन, आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध काम।
यो हो आठ पुस्तकहरु मध्ये पहिलो त्यो बाह्य जीवनीहरू कथित छन् जसमा, काम बनाउने। Suetonius सूचित गर्न र रमाइलो गर्न चाहान्थे शाही व्यवहार बारेमा। त्यस स्वरमा उसले सम्राट्को जीवन बताउनेछ, उनको मृत्यु हुनुभन्दा अघि उनको मृत्युसम्म, आफ्नो जीवन र चलनहरू पार गर्दै।
जूलियस सिजर - विलियम शेक्सपियर
केको बारेमा भन्न सकिन्छ सबै भन्दा राम्रो काम गरीरहेको छ संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध अंग्रेजी बारड को। शेक्सपियरले यसमा लेखेको हुनुपर्दछ 1599। रोमन सम्राट जुलियस सीजरको बिरूद्ध षड्यन्त्र, उनको हत्या र यसको नतिजा फेरि बनाउँनुहोस्। यो ऐतिहासिक घटनाहरूमा आधारित धेरै अन्य शेक्सपियर कार्य हो।। सिनेमा र थियेटरमा यसको विभिन्न संस्करणहरू क्लासिक्सको साथ अल्छीको लागि एक राम्रो विकल्प हो, तर यो एक अपरिहार्य हो कि यसलाई पढ्नुपर्दछ।
रोक्नुहोस् निश्चित जीवनी - एड्रियन गोल्डस्वायर
एड्रियन सुनार योग्य एक बेलायती इतिहासकार हो, मा विशेषज्ञ शास्त्रीय विश्व सैन्य इतिहास। यस जीवनीमा छुनुहोस् कासाको जीवनका सबै पक्षहरूr, आफ्नो सैन्य र राजनीतिक उपलब्धिहरु बाट उसको सब भन्दा सान्दर्भिक व्यक्तिगत घोटाला र महत्वाकांक्षाहरु।
एक व्यक्तिको आकृति को एक महान चित्र जो पूर्ण अन्धकार बाट कसरी बन्न जान्छ संसारको सबैभन्दा धनी मानिस र एक शक्ति होल्ड रोमन गणतन्त्र अन्त्य गर्न सक्षम। तर उनको मृत्युमा सम्राटले लगभग सम्पूर्ण ज्ञात संसारमा प्रभुत्व जमायो करिश्मा २००० भन्दा बढी बर्ष पछि स्थिर हुन्छ.
जहाँ पहाडहरू कराउँछन् - फ्रान्सिस्को नारला
मैले सिफारिस गरिसकेको छु एक पटक भन्दा बढी यस ऐतिहासिक उपन्यासहरूको लागि प्रसिद्ध प्रतिष्ठाका यस गालिसियन लेखकका यी महान पुस्तकहरू। र म यो फेरि गर्छु किनकि यसको पढाइ यी छुट्टीका दिनहरूको लागि उपयुक्त छ।
को एक समूह जुलियस सिजरलाई विश्वासी लिगेनिहरू भर्मिनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र आफन्तहरूको कुललाई आफै प्रस्ताव गर्नुहोस् Galicia ब्वाँसोहरू मार्न जुन उनीहरूको गाईवस्तुलाई हटाउँदैछ। तिनीहरू पौराणिक ठाउँ बताउन चाहन्छन् सुन खानीहरु। तिनीहरूबाट रोमका मास्टरले बहुमूल्य धातुहरू निकाल्ने छन् जुनसँग उनले सेनेटमा पेश गर्नेछन्। तर कहिले तिनीहरू गर्भवती ब्वाँसोलाई मार्दछन्, अन्तिम जीवित पुरुष, एउटा धूर्त र विशाल ब्वाँसोले रोमलाई आफैंले बदला लिनेछ उसको बदला लिन र जूलियस सीजरको गोप्य योजनाहरू काट्नुहोस्।
CESAR - कोलीन म्याक कुलो
यो हो पेन्टालजीको नतिजा यसको प्राचीन रोमलाई समर्पित सफल अष्ट्रेलियाली लेखक, दुई बर्ष पहिले निधन भयो। चलाउनुहोस् वर्ष 54 लाई JC र Cayo Julio CESAR को माध्यम बाट अग्रिम गलिया आफ्नो मार्ग पार गर्ने योद्धा राजाहरूलाई कुचल। रोमको नाममा उनका विजयहरू महाकाव्य हुन्, तर गणतन्त्रका नेताहरू उनीहरूको असीम महत्वाकांक्षालाई धेरै नै डराउँछन्। रोममा सबैभन्दा चतुर सैनिक सेना कतै जान सक्छ? जब क्याटो र सिनेटले उनीसँग विश्वासघात गरे, रुबीकन नदीको किनारमा रहेको सिजरले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन्छ: आफ्नो कृतघ्न मातृभूमि विरूद्ध जान।
जुलियस सीजर र lग्यालिक युद्ध गर्न - एने-मेरी Zarka
Este चित्र पुस्तक बाट प्रेरित छ ग्यालिक युद्ध मा टिप्पणीहरु जुलियस सिजर आफैले लेखेका थिए। यो बिचको उमेरका पाठकहरूको लागि हो एघार र चौध वर्ष पुरानो र यो रोमी साम्राज्य को इतिहास को एक धेरै राम्रो परिचय हो। प्रत्येक अध्याय समावेश छ खेल ध्यान तिखार्न र कथा र शब्दावली को समझ को जाँच गर्न। त्यहाँ तपाईंको दस्तावेज पृष्ठहरू समृद्ध बनाउन को लागी छन् सामान्य संस्कृति र समय को उनको ज्ञान।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » जूलियस सीजरको बारेमा7पुस्तकहरू उनको जन्मको वार्षिकोत्सवमा